हलमा चलचित्र ‘गोर्खे’, आउलान त दर्शक ? - Reel Mandu
हलमा चलचित्र ‘गोर्खे’, आउलान त दर्शक ?
आज फागुन २२ गते शुक्रबारको दिन देखि प्राविधिकहरुले मिलेर निर्माण गरेको चलचित्र ‘गोर्खे’ नेपालका सिनेमा घरहरुमा प्रदर्शन भएको छ। यस चलचित्रले गोर्खाली सैनिकहरुको कथालाई उठान गरेको छ । फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ रिलिज भएको डेढ महिनापछि यो चलचित्र हलमा लागेको हो।
कोरोन महामारीले गर्दा बन्द भएका हलहरु खुले पनि दर्शकहरु फिल्म हेर्न हल सम्म गएका छैनन्। यसले गर्दा हल व्यवसाहीहरुलाई निकै ठुलो असर परेको छन् भने केहि मोफसल हलहरु बन्द भैसकेका छन् र कति बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
किम्मत गौतमको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा रविन्द्र प्रताप सेन, अन्जली अधिकारी, अर्जुन गुरङ, एन्जल श्रेष्ठ, आश्मी लामा, आश्मी श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ।
तिर्थ राम कोजु, हरि थापाको लगानी रहेको चलचित्र कोजु इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको हो। चलचित्रमा काजी लिम्बुको कथा, हिमाल केसीको एक्सन, सौरभ लामा र निरज कँडेलको छायांकन, मित्र डी गुरुङको सम्पादन, छिन्दु पाख्रिन र हरि लम्सालको संगीत छ ।
यस फिल्मका प्रस्तुतकर्ता हरि लामा हुन् ।